उसले त बिहे गर्यो भन्दै भाईरल बिजय पुनले थाम्न सकेनन् मनको पिडा , बिजय पुन उसको त बिहे भयो रे ? – Complete Nepali News Portal
उसले त बिहे गर्यो भन्दै भाईरल बिजय पुनले थाम्न सकेनन् मनको पिडा , बिजय पुन उसको त बिहे भयो रे ?
काठमाडौँ । टिक-टक स्टार बिजय पुनले आफ्नो कलाकारिता मार्फत धेरै दर्शकको मन जितेका छन् । विशेषगरी टिक टकमा आफ्नो दमदार डाइलक पथर्को मुटुबाट लोकप्रिय बनेका बिजयले कलाकारिता क्षेत्रमा पनि आफ्नो अब्बल अभिनय मार्फत देश विदेशमा रहेका नेपाली दर्शकमाझ राम्रो छाप छोड्न सफल भएका छन् ।कलाकारिता यात्रालाई समानान्तर रुपमा अगाडि बढाइरहेका बिजयले दर्जन बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय समेत गरिसकेका छन् । यतिबेला नेपाली सांगीतिक बजारमा बिजय पुन नचिन्ने कमै होला,जहाँ जहिले जुन बेला पनि जे सुकै हुन सक्ने बजार न हो! गीत संगीत भन्ने बितिकै जस्तोलाई पनि सहज मनोरंजन दिन र लिन सक्ने उपयुक्त औषधि भन्दा फरक पर्दैन ।
बलिउडकाअब्बल युवा गीतकार सावेरी बर्माले नया गीत “छाप टिलक” सार्वजनिक